مشکلات جنسی جوانان ၏ မြန်မာ ဘာသာပြန် ဒုတိယ ပိုင်း ၊ အာယာသွလ္လာဟ် မကာရေမ် မိုရှီးရာဇီး အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
ဖဖေျောဝါရီ ၉, ၂၀၂၀ - ၁၁:၀၄ ညနေ News Code : 1009021 Source : ABNA Link:
အရပ်တိုင်းမှာ နာကျင်ဖွယ် ညည်းတွားသံ များအသံကျယ်နေ လေသည် …..!
အထူးသဖြင့် လူငယ်လူရွယ် အချိန်တွင် သဘာဝ တရားအရ (လိင်ကိစ္စဆန္ဒရှိမှုရှိကြောင်း) ကျွန်ုပ်တို့သိပေသည်။ ဤသဘာဝတောင်းတ ချက်(လိင်ကိစ္စ)ကို မှန်ကန်သည့်နည်းဖြင့် လမ်းညွှန်ပြသမှုမပြုခဲ့လျှင် လူငယ် လူရွယ်တို့၏ ကံကောင်းမှု၊ အောင်မြင်မှုကို မိမိ၏ပြင်းထန်သည့် ရိုက်ချက် (လုပ်ရပ်)ကြောင့် ပျက်စီးသွားရပေလိမ့်မည်း။ ၄င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ကြေကွဲ သွားစေလိမ့်မည်။
မြတ်အလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ထားသည့် ပင်ကိုအရည်အချင်း၊ အရည်အသွေး များသည်လည်း အခုဖူးပွင့်နေသည့် ပန်းအဖူးအငုံလေး ကြွေကျပျက်စီးရသကဲ့ သို့ပျက်စီးသွားရပေလိမ့်မည်။
၄င်းတို့၏ လာမည့်အနာဂတ်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀န်း အတွက်နှင့် မိမိအတွက် ရေသောက်မြစ်အဖြစ် ဂုဏ်ယူစရာများကိုဖြစ်စေနိုင် သည့် နဗူဂ်(ခ)အရည်အသွေးနှင့် အေဗ်သေကာ(ခ)၀ါသနာ၊ အသစ်တီထွင်မှု သည်လုံးဝအချည်းနည်း အလကားဖြစ်သွားလေ၏။
ဤလမ်းစဉ်၌ စတေးခံလိုက်ရသည့် လူငယ်လူရွယ်ပေါင်းလည်း မနည်းတော့ချေ။ ဤကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အိမ်မက်မှနိုးထလာပြီး နောက် (လမ်းမှန်ရောက်လာပြီးနောက်) မိမိ၏ရူဟ်၌ ကြောက်မက်ဖွယ် အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုနှင့်နောင်တကို ခံစားရလေ သည်။ အရည်အတွက်အမြောက်အများရှိလေသည်။
ဤလမ်းစဉ် ဤလမ်းစဉ်၌ စတေးခံရသည့် လူငယ်လူရွယ် အမြောက်အများ၏မရေမတွက်နိုင်သည့် စာများ ကျွန်တော်ဆီ (ကျမ်းပြုဆရာ တော်)ထံရှိလေသည်။
ဤစာများကြောင့် ထိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့် လျှို့ဝှက်ချက် တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖွင့်ဟပွင့်ထွက်လာလေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့်လည်း ကျွန်တော်အနေဖြင့် ဤကြောက်မက်ဖွယ် ခေါင်းစဉ်ကို ဆွေးနွေးတင်ပြပါမည်။
စာရေးသူများအနေဖြင့် မပြောပြနိုင်သည်အထိ တင်ပြတောင်းဆိုမှု၊ ကြောက်မက်ထိတ်လန့်ဖွယ် အဖြစ်အပျက်များကို ရင်ဖွင့်ခဲ့ကြလေသည်။ မိမိ တို့လွတ်မြောက်မှုနှင့် အဆင်ပြေချောမော စေမည့်နည်းလမ်းကိုလည်းတောင်း ဆိုထားကြလေသည်။
အမှန်အတိုင်း ပြောရလျှင် ကျွန်ုပ်သည် လည်းပဲ ဤမျှအန္တရာယ်၏ အရေးကြီးမှုကို မသိခဲ့ကြချေ။ သို့သော်သတင်းရရှိထားမှု သိရှိထားမှုအတွက် ကြောင့်မလွှဲသာမရှောင်သာ မိမိ၏စွမ်းအား၊ အင်အားနှင့်အညီ လူငယ်လူရွယ် များကို ဤအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အသိတရားပေးရတော့မည်။ အန္တရာယ် ကိုဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရင်းအစစ်များဖက်သို့ သတိပြုပေးရမည်။ အသိ ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကြီးကျယ်မြင့်မြတ် တော်မူသော မြတ်အလ္လာဟ်အို အရှင်မြတ် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် လူငယ်လူရွယ်များကို ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိ၏အကူအညီ အဖေးအမနှင့် ကင်းအောင် မထားပါနှင့်ဟု ဒိုအာဆုမွန် တောင်းလိုက်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ ထိုစာများမှ တချို့ကို (မူရင်းအတိုင်း) လူကြီးမင်းတို့အား ရေးသားတင်ပြပါမည်။
….. လူကြီးမင်းအနေဖြင့် မိမိ၏ဟောပြောတရားပွဲ၌ လူငယ်လူရွယ် များကို မိမိတို့၏အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းတင်ပြရန် မိန့်မထားသဖြင့် ဤစာကို ပို့ရ၌အမြန်လုပ်လိုက်ပါသည်။
ကျွန်တော်အမြဲတစေ ၀မ်းနည်းပူဆွေးနေရသည့် အခက်အခဲမှာ အမှန်ဆိုရလျှင် လိင်ကိစ္စနှင့် တဏှာ၊ ရာဂကိစ္စ ဖြစ်ပါသည် ခင်ဗျား။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ ကျွန်တော်ကို အမြန်ကြီးပျက်စီးတော့ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်၏ အခက်အခဲကို လူကြီးမင်းအားတင်ပြပါ့မယ်။
ကျွန်တော်ဟာအသက်(၂၃)နှစ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက် ပါ။ ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ မှန်ကန်၊ စစ်မှန်သည့် သွန်သင်ပြမှု မရခဲ့တာရယ်၊ အသိပညာမရှိခဲ့တာရယ်ကြောင့် “လမ်းလွဲလမ်းမှားမှုများမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် လိင်ကိစ္စတစ်ခု” နှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဤမကောင်းသည့် အလုပ်ကို လုပ်လာတာ (၇)နှစ် ဆက်တိုက်ရှိနေပါပြီခင်ဗျား။
အခုချိန်ထိ ဤမကောင်းမှုမှာ နစ်နေပါတယ်။ ဤအလုပ်ကို မလုပ် တော့ဖို့ ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစား မအောင်မြင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဤ လုပ်ရပ်စက်ဆုပ်ဖွယ်၏ ဆိုးကျိုးများကို ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲ၌ ဖတ်ရပါတယ်။ ထို့အပြင် မိမိကိုယ်၌လည်း(လက်တွေ့) ခံစားနေရပါတယ်။
ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေ အားနည်းကုန်ပါပြီ။ အကြောတွေအားနည်း ပြီး၊ သွေးအားနည်းခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာအားနည်းခြင်းနှင့် တုန်နေခြင်း၊ ပိန်ခြင်း၊ ၀မ်းနည်း စိတ်မချမ်းမသာ မကြည် ခြင်းတို့ကို ခံစားနေရပါပြီ။
တချိန်က ကျွန်တော်မှာ အင်အား ခွန်အား အပြည့်အ၀ ပိုင်ဆိုင်ထား သည့်အတွက် ပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ယခုအချိန် ကျွန်တော့ ခွန်အားတွေလျော့သွားပါပြီ။ (စာ၏ဆိုလိုချက်များကို မှန်မှန်ကန်ကန်လည်း အသေအချာ နားမလည်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း အတင်းအဓမ္မ ပညာဆက် လက်သင်နေရပါတယ်။
ကျွန်တော်စာရေးဖို့ ဘောလ်ပင်ကိုကိုင်တိုင်း ရေးဖို့ခွန်အားမရှိဖြစ်ရ ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဘောလ်ပင်ကိုချပြီး အားပြန်ဝင်လာတဲ့အထိစောင့်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရေးရပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဆီမှာ အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်မှုလည်း နည်းသွားပါပြီ။ ကျွန်တော်အတွင်းစိတ် ကျွန်တော့်ကိုအမြဲတစေ နိမ့်ချနေပါတယ်။
မလွဲသာမတတ်သာလို့ ထောင့်တစ်နေရာရာမှာ သွားသွားထိုင်ပြီး အကြာကြီးငိုပါတယ်။ မျက်လုံးတွေဆို နီရဲကုန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဗျာ အကျဉ်း ပြောရရင် သနားစရာ ကံမကောင်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကူမဲ့သူ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး။
ဤမျှဆိုးကျိုးများကိုမြင်ရ ပါလျက် ဤအလုပ်ကိုဘာကြောင့်လက် မလွတ်နိုင်ရသည်ဆိုသည့်အချက် လူကြီးမင်းသိကောင်းသိပါမယ်ခင်ဗျား?
ဤအတွက်အဖြေလည်းကျွန်တော်ဆီမှာရှိပါတယ်။ယနေ့ဒီအလုပ် ကိုလက်လွတ်ဖို့ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးခင်ဗျား။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ တဏှာ၊ ရာဂနိုးထလာလျှင် ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်ဆုံးဖြတ်ချက် (လွတ်ဖို့) အင်အား ယုတ်သွားပါတယ်။
အားလုံး(တဏှာ၊ ရာဂအကြိုက်) လုပ်ပြီးပြီဆို နောက်ငိုတာမျက်ရည် ကျတာဖြစ်ပါတယ်။
တခါတလေ ကျွန်တော်မြတ် အလ္လာဟ်ထံ ဒိုအာ တောင်းပါတယ် ခင်ဗျား။ အေမမ်များ(အ.စ)ထံသ၀ါဆိုလ်ပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျား၊ဒိုအာဆုမွန် တောင်းတိုင်း တောင်းတိုင်းရလာဒ်အနည်းငယ်ကိုသာရပါတယ်။
တခါတရံ ကျွန်တော်လေ မြတ်အလ္လာဟ်နှင့်ပြစ်မဲ့ အေမမ်များ(အ.စ) များဟာ ကျွန်တော်တို့လို အပြစ်သမား၊ ဒုစရိုက်သမား၊ မသန့်ရှင်းသူများကို လုံးဝဂရုပြု။ သတိမထားဟု ထင်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်လိုမျိုးအကူအညီ၊အမှီအခိုမဲ့သူများဟာ မိမိတို့၏နှလုံးသား ၏ ခံစားမှု၊နာကြင်မှုများကိုမိမိတို့ဆွေမျိုးသားချင်းများကိုပင် ပြောမပြနိုင်သည့် အထိ သနားစရာကောင်းသည့် အခြေအနေကိုရောက်နေပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဘယ်သူ့ဆီအကူအညီတောင်းရမည်နည်း။?
ကျွန်တော်၏ညည်းခံခြင်း၊ ခန္တီးတရားခွက်လည်း မှောက်နေပါပြီ။ အသက်ထွက်ဖို့ လည်ပင်း အထိရောက်လာပါပြီ။ မြတ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော့်ကို သနားကြင်နာပါစေ။ လွတ်မြောက်မှုလမ်းကို ညွှန်ပြတော်မူပါစေ။ အကယ်၍ ဆေးအညွှန်းအရ လူကြီးမင်းသိလျှင် ကျွန်တော်ကို အသိပေးပါခင်ဗျား။ ဧကန်မုချ လူကြီးမင်းသိပါတယ်။
ကျွန်တော်လိုမျိုး လူကြီးမင်းကိုလေးစားရိုသေဖို့ လူကြီးမင်းအတွက် လိုမည်မဟုတ်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀န်းတွင် နေထိုင်သူများ ရိုသေ လေးစားရပေမည်။မုချဧကန် မြတ်အလ္လာဟ် လူကြီးမင်းကို ကောင်းမြတ်သည့် ဆုလာဒ်တော်ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လူငယ်လူရွယ်များ၏ လမ်းမှန်ကိုညွှန်ပြနိုင်ရန် မွန်မြတ်လှသည့် လူကြီးမင်း၏ ကြိုးပမ်းမှုကို စတင်ပြီးဖြစ်ရာ ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သိထားပြီးသည့် အတိုင်းကျွန်တော် အတွက်ရှင်းလင်းပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မြောက် များစွာသော စာရေးဆရာများရေးသားမှုများ၊ ထုတ်ဝေပုံနှိပ်ပြီး (စာရေးဆရာ များဟု ဆိုလျှင်ပြောရပေမည်။)၏ ဆန့်ကျင်ဖက် လူကြီးမင်း၏ ရေးသားမှုများ သည် လူငယ်လူရွယ်များ၏ ကံကောင်းမှုအတွက် ကြီးကျယ်သည့်အရာ အသွင်ဆောင်နေပါတယ်။
မည်သို့ဆိုစေ ကျွန်တော်ဟာ အသက် (၁၈) နှစ်အရွယ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဖြစ်ပါသည်။စာသင်ချိန်အစကတည်းမှစ၍ကျွန်တော်ဟာ ထူးချွန် သည့် ကျောင်းသားများစာရင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်လည်းပဲ ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်ချိန် အချို့သီးသန့် အကြောင်းခံများကြောင့် ရှုပ်ထွေးပွေလီနေသည့် ကျော့ကွင်း၌မိသွားတော့ပါ တယ်။ ထို(ကျော့ကွင်းကို) လူကြီးမင်းကောင်းကောင်းသိပါသည် ခင်ဗျား။
တနည်းဆိုလျှင် ဤအခက်အခဲသည် ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်နေရမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်ကဲ့သို့ အရွယ်တူအမြောက်အများသည် လည်းပဲ ဤအခက်အခဲတွင် နစ်မြှုပ်နေပါတယ်။
အကြိမ်ပေါင်းများစွာဤလုပ်ရပ်အတွက်လောင်စာ(၀န်ချတောင်းပန်မှု)ကို ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ကျွန်တော်စိတ်ဟာ အားနည်းအားပျော့သထက် အားနည်းအားပျော့သွားပါတယ်။
အခုကျွန်တော်အနေဖြင့် ကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်ခန္ဓာ၌ အကောင်းဆုံး တကာ့အကောင်းဆုံးအရာများ ဖြစ်ကြသည့် နှလုံး၊ ကျွန်တော်၏အကြော အချဉ်များတွင် ချွတ်ယွင်းမှုများရှိလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ကျွန်တော့်ကိုယ်ကို အမြဲအထင်အမြင်သေးမှုကို ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော် စကားပြောနည်းသွားပါတယ်။ အားကစားလည်းမလုပ်တော့ပါ။ ယုတ်စွအဆုံး ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ အိမ်များသို့လည်းသွား မလည်ဖြစ်တော့ ပါ။
ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ဟာ အရမ်းမကောင်းဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ်။ လိုအင်ဆန္ဒဆုံးဖြတ်မှုခွန်အားဟာ ဤမကောင်းသည့်အလုပ်ကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ခက်ခဲသည်အထိ ကုန်ခမ်းသွားပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ ကိုယ်လုံးတီး၊ နီးကပ်အမျိုးသမီးများ၏ဓာတ်ပုံ များကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူ လူငယ်အများစုကြည့်ကြပါတယ်။
စက်ဆုတ်ဖွယ်ကောင်းသည့် အပြာကားများကြည့်တာ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ မကောင်းသည့်စာအုပ်တွေ လည်းကြေနည်းနည်းလေး ဖြင့် အမြောက်အများရပါတယ်။
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ကျွန်တော်ကိုလမ်းညွှန်ပါခင်ဗျား။ဤကြောက်မက်၊ကြောက်လန့်ဖွယ်မကောင်းမှုမှ ချေမှုန်းပစ်စေနိုင်ရန် ဘာလုပ်ရမည်ဆို တာလည်းမိန့်ကြားပေးပါခင်ဗျား။
လူကြီးအနေဖြင့် လူငယ်လူရွယ်များ၏ အခြေအနေနှင့်ကျွန်တော် တို့၏ နှလုံးသားနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိပါသလား?
လူငယ်လူရွယ်တချို့ဟာ ကြီးမားစက်ဆုတ်ဖွယ် ဒုစရိုက်အပြစ်ကျူး ကျော်နေပြီး စာရိတ္တပျက်ပြားမှုများ နစ်မြှုပ်နေတာ လူကြီးမင်းသိပါသလား ခင်ဗျား။?
ရက်အနည်းအငယ်အရင် ကျွန်တော်ရဲ့မြို့ရှိ စရ်ယာလမ်းပေါ်မှာ ဖြတ်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကျွန်တော်အနေဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာခံစားမှုမရှိ၊ မျက်စိကန်းနေသည့်(၂၅)နှစ်ခန့်အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်ကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူကိုသူရဲ့ညီကလက်တွဲထားပြီး လမ်းဖြတ်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့်ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှဆင်းပြီး သူရဲ့ညီငယ်ကိုသိသည့် အတွက်သူနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
သူ့အနေနှင့် ဒါကျွန်တော့်အစ်ကိုဟုပြောလေရာအံ့သြသွားရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားအစ်ကို ဒါမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲဟုမေးမြန်းပါ တယ်။ အဖြေပေးပါတယ်။ အစ်ကိုအသက်(၂၀)အထိတော့မကောင်းတာဘာ မှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်လည်းပဲ မကောင်းသည့်နည်းဖြင့် လိင်ကိစ္စကြောင့် နှစ်အနည်းငယ်အရင်အစ်ကို့မျက်လုံးတွေကန်းသွားခဲ့ရပါတယ်။ အခုထိလည်း အစ်ကိုက သူ့အကျင့်ဆိုးကို မဖျောက်သေးပါဘူး။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှ လူငယ်လူရွယ်များကိုဤ ဆုံးရှုံးမှုဆိုးကျိုးမှုများမှ ကုသနိုင်မည့်နည်းလမ်းကို ညွှန်ကြားပေးပါခင်ဗျား။ ကျွန်တော့်တို့အနေဖြင့် ဤအညစ်အကြေးများမပေးရန် မည်သည့် အလုပ်ကို လုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသနည်း?
မြို့ပေါင်းစုံမှ လာသည့်စာများမှ ဤစာများသည် တစ်ချို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် စာရေးသူများ၏ အမည်အရင်းနှင့် အချို့အရေးမကြီး သည့် စာပိုဒ်များကို ဖြုတ်ပြီး လူကြီးမင်းစာရှုသူတို့အား အထက်၌တင်ပြ လိုက်ပါသည်။
ဤစာများနှင့် ဤကဲ့သို့သော အခြားစာများသည် ကျွန်ုပ်လူငယ် လူရွယ်များ၏ အခြေအနေနှင့် အနာဂတ်အတွက် လက်တွေ့အမှတ်အသား များဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်လည်းပဲ လူငယ်လူရွယ်များအကြား သန့်ရှင်းသန့်စင်ပြီး မညစ်ပတ်သေးသော မည်သည့် မကောင်းမှုစာရိတ္တ ဖောက်ပြန်မှုကို မကျူး လွန်ခဲ့သည့်လူငယ်လူရွယ်များလည်း အမြောက်အများရှိသည်ကို ငြင်းမရချေ။ သို့သော်လည်း (မကောင်းမှုလိင်ကိစ္စ)အတွက် မြောက်များစွာသော လူငယ် လူရွယ်များ စတေးမှုများပေးခဲ့ရလေသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လက်ပေါ်လက်တင်ပြီး ထိုင်၍ကြည့် နေမည်ဆိုလျှင် သန့်ပြန့်သူ လူကောင်းများလည်း ဤအညစ်အကြေးတွင် နစ်လာမည့်အချိန် မဝေးတော့ချေ။ နစ်နာသူများအားလုံး ခြုံငုံ၍ ဆိုရလျှင် လက်လွတ်လိုက်ရပေလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ် အခြားစတေးမှုများကို ပေးရပေ လိမ့်မည်။
ဤနည်းဖြင့် မတတ်နိုင်သူများ၊ သနားကြင်နာဖို့ထိုက်သူများ၊ ရှုံးခဲ့သူ များ၊ ဆင်းရဲသားများသည်လည်း ရာဇ၀တ်သားအဖြစ် ဘ၀သို့ ရောက်သွားရ လေမည်။
လူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့်ဤအဖြစ်ဆိုးမှ လွတ်မြောက်ရန်အတွက် လိုလားပါကဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါသည်။ ပြီးနောက် သန့် ပြန့်သန့်ရှင်းသူများအနေဖြင့်လည်း သတိဂရုပြုခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကို မကောင်း သည့်နည်းဖြင့် ဖြည့်ဆီးသည့် လိင်ကိစ္စအမျိုးမျိုးမှ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင် ပေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားများသည် ဤစတေးခံရသူများ၏တိုင်တည် သံကြောင့် တုန်လှုပ်ခဲ့ရပါသည်။ ၄င်းတို့၏ရေးသားမှု၏ ကလောင်ထိပ်ဖျား သည်ငိုကြွေးခဲ့ပြီး ကူညီရန် တောင်းဆိုပေသည်။
ဤအတွက်မနုဿလူသားတိုင်း၏ နှလုံးသားတွင် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် တစ်ခုအသွင်ကိုဆောင်စေပေသည်။
ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလ၏ ကံဆိုးမိုးမှောင်မှုမှာ ယနေ့မှားယွင်း လွဲမှားနေသည့်သွန်သင်မှုအနေဖြင့် စာရိတ္တကိုပျက်ပြားမှုဖြင့် ပြည့်လျှံနေသည့် စာအုပ်စာပေညစ်များ၊ အပြာရုပ်ရှင်များ၊ တဏှာ၊ ရာဂ ကိုထစေသည့်ဓာတ်ပုံ များ ဤကဲ့သို့သောအရာများဖြင့် လူငယ်လူရွယ်တို့၏ လိင်ကိစ္စကို ပိုမို၍ အန္တရာယ်ရှိသည့် အဆင့်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့လေပြီ။
လွတ်လပ်မှုဆိုသည့် အမည်ကိုအလွဲသုံးစားပြုကြပြီး၍ (လိင်ဖောက် ပြန်ရေးကိစ္စ) ကိုပိုမို၍ အများဆုံးအဆင့်အထိ ပို့ခဲ့ကြလေသည်။
အကယ်၍ ဤမကောင်းမှုအား အခြေခံကျကျတော်လှန်မှု မပြုခဲ့မည် ဆိုလျှင် မုချဧကန်မလွှဲ လူငယ်လူရွယ်များကို အနာဂတ်တွင် (ကံဆိုးမိုးမှောင် ကျမှု) နှင့် သေတွင်းသို့ကျမှုကို ရင်ဆိုင်ရပေလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်လည်းပဲ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် မြောက်များစွာသော အထက်ပါ စာများ၌ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လူငယ်များကို ဤလမ်းစဉ်တွင် စတေးခံခဲ့ ကြသူများဟု ထင်ထားကြလေသည်။ (အမှန်တကယ် ဤအရာများကို ယခု စတေးခံခဲ့မှုဟု ပြောမရသေးချေ။) ပြီးနောက်ထို့ပြင် အခြားနမူနာများကိုလည်း အနည်းနှင့် အများဆိုသလို စာရှုသူချစ်ပရိသတ်ကြီး အနေဖြင့် တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ် ပေသည်။
ဤမြင်တွေ့ရမှုသည် ဆရာသမားတစ်ဦးပမာ မြောက်များစွာသော အရာများကို အားလုံးကို သင်ကြားပို့ချပေးနိုင်လေသည်။
သို့သော် ….. ဤခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းပြီးအရေးကြီး သည့်အတွက်ကြောင့် တင်ပြဆွေးနွေးရန်၊ စကားဆိုရန် လိုအပ်ပေသည်။ လူငယ်လူရွယ်တို့၏ ဘ၀ခရီးလမ်းရှိဆူးငြောင့် ခလုတ်များကိုသူတို့လေးတွေ အားလုံးသိလာအောင် သတိပေးပြီး၊ ဖြေရှင်းနိုင်မည့်လမ်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြ ရပေမည်။
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် လူကြီးမင်းစာဖတ်ပရိတ်သတ်အားလုံးနှင့်မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟများကို ဤကိစ္စ၊ ဆွေးနွေးမှုနှင့် နွယ်ပြီး အတိအကျအသေးစိတ် လေ့လာပေးရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
အကယ်၍ မိမိတို့၏ နှလုံးသားကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ပေးသမျှ(လမ်းညွှန်မှု) များကို အသင်တို့အနေဖြင့် လက်တွေ့ကျင့်သုံးမည်ဆို လျှင် အန္တရာယ်မျိုးစုံမှ လုံးဝကင်းလွတ်ခွင့်ရလိမ့် မည်ဖြစ်ကြောင်း စိတ်ချစေ လိုပါသည်။
" မရှိလို့ မလှူ၊ မလှူလို့ မရှိ "
ရှင်းနေပါသည်။သားပေးမှ ချွေးမ၊ရတာ … သမီးပေးမှ
လူငယ်လူရွယ် များတွေ့ကြုံ၊ ရင်ဆိုင်နေရသည့် အရေးကြီးပြဿနာ များမှ ဤပြဿနာသည်လည်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မပျက်စီးသေးသောသူများအတွက်ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် လမ်းနှင့်ပျက်စီး ပြီးသူများအတွက် ကုသရမည့်လမ်း !
ပြီးခဲ့သည့်ဆွေးနွေးတင်ပြမှုများတွင် ဖော်ပြထားသည့်ဖြစ်ရပ်မှန်ပမာ များကြောင့် လိင်ကိစ္စဖောက်ပြန်မှုများနှင့် မကောင်းသည့်မှားယွင်းသည့် အကျင့်ဆိုးများဟာ လူငယ်လူရွယ်များကို မစွမ်းမတတ်နိုင်အောင်၊ မျှော်လင့် ချက်ကင်းမဲ့မှု၊ခေတ်နောက်ပြန်မှုနှင့် ရောဂါဖြစ်မှုကိုဖြစ်စေကြောင်း ထင်ရှားစွာ သိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပြီးတော့ လူငယ်လူရွယ်များကို “ရူးသွပ်ခြင်း” နှင့် “သေဆုံးခြင်း” အထိပို့လေ၏။
၀မ်းနည်း၊ ကံဆိုးလေစွ၊ ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်ကာလ၌ အချို့လူများက ဤကိစ္စကို “ခေတ်ကာလ၏ လိင်ပြဿနာများ၊ လိင်ကိစ္စများ” ဟုအမည်တပ် ကြလေသည်။ မြောက်များစွာသော ရည်ရွယ်ချက်မဲ့သည့် စာရေးဆရာများ အနေဖြင့်လည်း ဤလူငယ်လူရွယ်များ လိင်ကိစ္စဖောက်ပြန်မှုများကို အသေး အမွှားကိစ္စ၊အရေးသိပ်မကြီးသည့်အရာအဖြစ်တင်ပြရန် ကြိုးစားကြလေသည်။ တစ်ခါတစ်လေ အချို့ပျက်စီး၊ လမ်းမှား၊ လမ်းလွဲ နေသူများကို ပျော်ရွှင်၊ သဘောကျစေရန်ဤ(မကောင်းမှုများကို)လူငယ်သဘာဝ၏လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဟုတင်ဆက်ကြလေသည်။
ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့အသိပင် …..အချို့အနေဖြင့် ဤ (မကောင်း မှု) ကို ကိုယ်တိုင်အတွက်နှင့် မသန့်မပြန့်သည့် ငွေများ ရှာဖွေဖို့အတွက် အသုံး ချလေသည်။ ပြီးနောက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်လိုင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနှင့်တဏှာ၊ ရာဂကို နိုးထလှစေမည့် ဓာတ်ပုံများကို ထုတ်လုပ်စီစဉ်ပြီး မြေနှင့်အချိန်ကို မလေးမစားမရိုမသေပြုကြလေသည်။ မည်သည့်လိမ်လည်မှုကိုမဆို ကျူးလွန်
ပမာအားဖြင့် မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် “အမျိုးသမီးများ” အမည်ဖြင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလေသည်။ ရေးသားပြုစု သူများ၏ ပြောကြားချက်အရ၊ သတင်း တစ်ခုအရဥရောပတစ်တိုက်လုံးကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်လာလေသည်။(နာမည် ကျော်လာလေသည်။)
(ဤ (မကောင်းမှု၏) (ဆိုးကျိုး) သက်ရောက်သည့် အာနိသင်များ သည် အခြားတိုက်များသို့လည်း အလျင်အမြန်ရောက်လာမည်ဆိုသည်မှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည်။)
ထို“အမျိုးသမီး”မဂ္ဂဇင်းတွင် ရေးသားကြေငြာထားသည်မှာ - အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် မိမိယောင်္ကျား၊ ခင်ပွန်းအတွက် ချစ်သူတစ်ယောက် အလိုရှိကြောင်း၊ ရှာနေကြောင်းဖြစ်ပေသည်။
၄င်းတို့အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့သော သတင်းများကို ဖြစ်နိုင်ချေများသည် မှာ ကိုယ်တိုင်(သို့မဟုတ်) ၄င်းတို့၏လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်များမှ စီစဉ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့၏ မဂ္ဂဇင်းအား ကြေငြာရန်နှင့်ကျော်ကြားစေဖို့ ထည့်သွင်းဖော် ပြကြလေသည်။ ဤကဲ့သို့သောသတင်းများကြေငြာထုတ်ဝေခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်း ကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းကို အရှက်သိက္ခာမဲ့မှုနှင့် မကောင်းမှု ဒုစရိုက်ပြဿနာများ မှအပ အခြားမည်သည့်အရာမျှ မဖြစ်ပေါ်စေပါ။
ကံဆိုး၊ မိုးမှောင်ကျရောက်မှုမှာ ဤမျှလေးတင် မပြီးသေးချေ၊ (တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင်) ယုတ်စွအဆုံး ပညာရပ်ဆိုင်ရာဝေါဟာရအရ ပြောရလျှင်အချို့လူမှုရေးကျွမ်းကျင်သူများ၊စိတ်ဓာတ်ရေးရာကျွမ်းကျင်သူများ၊ ဆရာဝန်များသည်လည်း ဤ “လိင်ကိစ္စဆိုင်ရာ၊ လိုင်းတံပိုး” ကိုသဘာဝနှင့် ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေသည့်အကြောင်းသက်သေထူရန် ကြိုးပမ်းပါလေသည်။
အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် ဤမှားယွင်းမှုနှင့် အန္တရာယ်ရလာဒ်များ ကိုလက်ခံထားကြပါသည်။ သို့သော်လည်းပဲ ရှင်းလင်းတင်ပြမှု၏ နည်းစနစ်ကို သုံးရာ၌ ဤ(မကောင်းမှုကို)ဖြေရှင်းနိုင်မည့်အစား၊ နစ်မြှုပ်နေသည့်သူများကို ကူညီဖေးမရာ မရောက်တော့ပဲ လမ်းလွဲလမ်းမှားကိုသာ ပို့စေလေသည်။
ဤမကောင်းမှုအပေါင်း၏အကြောင်းခံများအနေဖြင့်လူငယ် လူရွယ်များအကြား လိင်ကိစ္စဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုကို အတိုင်းထက်အလွန်ရှုပ် ထွေးပွေလီအောင်၊ ကြောက်မက်ထိတ်လန့်ဖွယ် ကောင်းအောင် တွန်းပို့လေ သည်။ ဤကောင်းမှုများ၏ အရင်းအမြစ်ကို ထုတ်ပစ်ရှင်းလင်း၊ သုတ်သင်ရန် လွယ်ကူသည့်ကိစ္စ မဟုတ်ချေ။ ဤကိစ္စအတွက် အချိန်၊ ဘဏ္ဍာငွေနှင့် တိကျ (ခိုင်မာသည့်) အစီအစဉ်များ အမြောက်အများ လိုအပ်ပါသည်။
လူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့် အချိန်တိုင်းတွင်မလွဲမသွေ မိမိတို့၏ ခိုင်မာ၊ တည်တံ့သည့် အသိဥာဏ်၊ တွေးခေါ်စဉ်းစားမှုကို အမှီသဟဲ ပြုပြီး မိမိ တို့၏မှန်ကန်သည့် ခံစားမှုများအဖြစ်ဆုံးကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် အသိပညာမဲ့မှု နှင့် ဒုစရိုက်မကောင်းမှုများကို ရှင်းလင်းရပေမည်။ အမှန်တရားနှင့်မနုဿ လူသားကို လမ်းလွဲလမ်းမှားရောက်စေသည့် စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကို အလုပ် မလုပ်စေသည့် ဆိုလိုမှုများကို နားလည်အောင် လုပ်ရပေမည်။ တစ်နည်းအား ဖြင့် စဉ်းစားတွေးတောဆင်ခြင်ရပေမည်။ အမှန်တရားများကို ခံစားနိုင်ဖို့ နားလည်ရန်ပြုရပေမည်။နှစ်နှင့်နှစ်ပေါင်းလေးကဲ့သို့ ပြဿနာများ၊ ကိစ္စများကို သိမြင်ရပေမည်။ ဤသေချင်ဖွယ်လောက်ကောင်းသည့် ဖောက်ပြန်မှုများ၏ နောက်ဆုံး(ဆိုးကျိုး)ရလာဒ်ကို ကိုယ်တွေ့မြင်အောင်ကြည့်ရပေမည်။
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ဤနေရာ၌ ပထမဦးစွာ ဒေါက်တာများနှင့်သုတေ သီများ၏ အထောက်အထား၊ ထောက်ခံချက်များကို တင်ပြပါမည်။ ၄င်းတို့ (ဒေါက်တာများနှင့် သုတေသီများ) သည် မိမိတို့ဘ၀ကို ဤပြဿနာ၊ကိစ္စများ ၏လေ့လာရေးအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးချခဲ့ကြလေသည်။
ပြီးနောက်လိင်ကိစ္စဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်း အရင်းများနှင့် ဆက်နွယ်ပြီးခွဲစိတ်၊ ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြမှုကို ပြုသွားပါမည်။ ထို့နောက် ဤအကျင့်ဆိုးများ တော်လှန်ရမည့် နည်းလမ်းကိုတင်ပြပါမည်။
အကျော်အမော် ဒေါက်တာတစ်ဦး အနေဖြင့်မိမိ၏ စာအုပ်၌ ဤ ရှက်ဖွယ်၊ စက်ဆုပ်ဖွယ်အကျင့် (လက်ဖြင့်အာသာဖြေခြင်း)၏ ဆုံးရှုံးမှုများကို ရေးသားတင်ပြထားသည်။ လက်တွေ့စိစစ်ထားကြသည့် ဒေါက်တာများ၏ ရှင်းပြမှုများကို ဆင့်ဆိုတင်ပြပါမည်။
“ကျွန်တော်အနေဖြင့် လူငယ်တစ်ဦးကို ၁၅ နှစ်သားအရွယ်မှ ၂၃ နှစ် အရွယ် အထိလက်ဖြင့် အာသာဖြေသည့် အကျင့်ဆိုးပြုခဲ့ သည်ကိုတွေ့ဖူးပါ တယ် …..
ဒီကောင်လေးအနေဖြင့် စာအုပ်ဖတ်ချင်တယ်လုပ်တိုင်း မျက်လုံးများ မှာ အမှောင်ကိုသာ မြင်ရပြီး၊ ခေါင်းကိုက်သည့်အထိ ကိုယ်ခန္ဓာအားနည်းသွား တာကို ခံစားရတယ်လေ … စရ်စာမ် ( سرسام ) အမည်ရှိ အရက်ရူး ရောဂါ သည် အခြေအနေမျိုးနှင့် တူနေလေတယ် …..
သူ့အတိုင်းနောက်လူတစ်ယောက်၊ ပျော်ပျော်နေတတ်သူ (ဒီအကျင့် ဆိုးရှိသူ)ဆိုလည်းသူ၏မျက်လုံးတွေရှိမျက်အိမ်ဟာအကြီးကြီး၊ ကြီးသွားတယ်၊ ပြန့်သွားတယ်လေ ….. နောက်မျက်လုံး အလွန်နာကြင်တာကို ခံစားရတာကို (တွေ့ရတယ်) …..”ဟုပြောခဲ့လေသည်။
ဒေါက်တာ Huotchinson မှလည်း တွေ့ရှိမှုများကို (ဤကဲ့သို့) သက်သေထူထားလေသည်။
“အများအားဖြင့် ယောင်္ကျားတန်ဆာနှင့် သက်ဆိုင်သည့်၊ ပတ်သက် သည့်ရောဂါများသည် လက်ဖြင့်အာသာဖြေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ….. မျက်လုံးအတွင်းရှိ မျက်ဆံနှင့် အခြားမျက်စိအမြှေးပါးဆိုင်ရာ ရောဂါဝေဒနာ များသည်လည်း ဤလက်ဖြင့်အာသာဖြေခြင်း၏ ရလာဒ်ဆိုးပင်ဖြစ်ပါတယ်…”
အထက်ဖော်ပြပါ ဒေါက်တာမှ ဆက်လက်ပြောကြားသည်မှာ-
“ဤအကျင့်ဆိုး (လက်ဖြင့်အာသာဖြေခြင်း) ပထမဦးဆုံးရလာဒ်ဆိုး ကျိုးမှာမျက်လုံး၏ကြည်ကြည်လင်လင်မြင်နိုင်စွမ်းကို ကုန်စေခြင်းနှင့် အရောင် အစစ်ကို ပျက်စီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် …..
ထိုနည်းတူစွာ ညှိုးနွမ်း၊ နွမ်းနယ်သွားလေတယ် ….. ဤအကျင့်ဆိုး ရှိသူများကတော့ ပထမဆုံး အသိတရား၊ အသိဥာဏ်ပျက်စီးစွားစေပါတယ် … ၄င်းတို့၏ မျက်နှာဟာ မသာမယာသောက၊ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံပေါ်လွင်နေ ပါတယ် … မျက်စိဟာ အနီကွင်းတွေ ရှိနေပြီး ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာဟာ ပျင်းရိ ပျင်းတွဲ ဖြစ်ခြင်းစလာပါတော့တယ် …..”
မှတ်ဥာဏ်အားနည်းခြင်း၊ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊အစာမကြေခြင်း၊အသက် ရှူကြပ်ခြင်း၊ စာရိတ္တပြောင်းလဲခြင်း၊ စိတ်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ မတင်ပြနိုင်ခြင်း၊ ရန်ငြိုးစိတ်ဖြစ်လာခြင်း၊၀မ်းနည်းသောကဖြစ်ဖြင်း၊ မနာလိုဝန်တိုခြင်း၊စိတ်မရွှင် ခြင်း၊ အမြဲတမ်းအထီးကျန်နေထိုင်ခြင်း နှင့် တွေးတောနေခြင်းစသည့် (ဒုက္ခ အခက်အခဲများအားလုံးသည်)ဤလိင်ကိစ္စဖောက်ပြန်မှုများ၏ရလာဒ်ဆိုးဖြစ် ပေသည်။
ဤဒေါက်တာအနေဖြင့် မိမိ၏စာအုပ်တွင် အခြားနေရာ၌ဤ(အကျင့် ဆိုးကြောင့်) သွေးနည်းခြင်း၊ ရုပ်နှင့်စိတ်ဆိုင်ရာ ခွန်အားများ ပျက်စီးရခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်မှုနှင့်နားရောဂါ၊ခါးကိုက်၊ခါးနာ၊အသက်ရှူကြပ်ခြင်းမှတ်ဥာဏ်နည်း ခြင်း၊ပိန်ခြင်း၊အားနည်းအားပျော့၊ပျင်းရိခြင်းနောက်ဆုံးအကျဉ်းအားဖြင့်ခန္ဓာ ကိုယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးအင်အားမရှိခြင်းကိုဖြစ်စေကြောင်းထပ်ဖြည့်ရေးသားထားလေသည်။
“လူတစ် ယောက်ကို ဤ လာဒ်မရှိသည့် အကျင့်ဆိုးစွဲနေလေ၏။အ ဆက်မပြတ်ဒီအလုပ်ပဲလုပ်နေခဲ့လေ၏။ တဖြည်းဖြည်း နှင့်သူဟာအသိဥာဏ် အားနည်းမှု ကိုအပြင်းအထန်ခံစား ရလေတော့သည်။ နောက်ဆုံး ဤ အကျင့် ဆိုးကြောင့်ပေါင်နှင့်ခြေသလုံး ရှိ အသားများမကျန်တော့ ဘဲပိန်လိန် သွားသည့် အခြေအနေအထိ ရောက်သွားရလေသည်။ သူခါး အမြဲတစေနာကြင် နေလေ၏။ ဒါလည်းဒီအကျင့်ဆိုး ကို လက်မလွတ်ချေ။ နောက်ဆုံးသူကိုယ်ခန္ဓာဟာလေ ဖြတ်သွားလေ၏။ (၆)လတိုင် တိုင် အိပ်ယာပေါ် လှဲသွားပြီးသေမလို၊ရှင်မလိုဖြစ် လေ၏။နောက်ဆုံး သေခြင်း၏ ရင်ခွင်သို့ဝင်သွားရလေ၏။”
အနှစ်ချုပ်၊အကျဉ်းချုပ်ဆိုရလျှင်ဤကဲ့သို့သော်ကျွမ်းကျင်အတွေ့ အကြုံရှိသည့်ဒေါက်တာများ၏တင်ပြချက်အရ-ဤကဲ့သို့သော်လိင်ကိစ္စဆိုင်ရာ ဖောက်ပြန်မှုများသည်ဆေးပညာအရဖြစ်စေ၊ဘာသာရေးအမြင်အရဖြစ်စေ စက်ဆုပ်၊ရွံရှာဖွယ်ရာပင်ဖြစ်လေ၏။မနုဿလူသား၏ဘ၀တည်ရှိမှု၊ဖျက်စီး၊ ပျက်စီးစေရာအကြောင်းခံဖြစ်ပြီး၊နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းယိမ်းယိုင်စေလေ သည်။
မည်သို့ဆိုစေဤကဲ့သို့သော်လိင်ကိစ္စဖောက်ပြန်မှုများနှင့်ပတ်သက် ပြီးဆုံးရှုံးမှုများအမြောက်အများရှိရာအကျဉ်းချုပ်သာရှင်းလင်းတင်ပြထားပါ သည်။
တရားဝင်နှင့်သဘာဝနည်းလမ်းအရလိင်ကိစ္စကိုဖြည့်ဆည်းရန်အ တွက်အချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုအပ်ပေသည်။ဤအရာသည်အခြေအနေ တိုင်းတွင်မဖြစ်နိုင်ချေ။
အထက် ဖော်ပြပါဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့် အလွန်တရာ အရေးကြီးသည့် ဤ ကိစ္စကိုရှေ့ရှုပြီး လူငယ်လူရွယ်တို့ များခန္ဓာ ကိုယ် အရေး၊တွေး တောဆင် ခြင် အ ရေး၊ စာရိတ္တကိစ္စ၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေးကိစ္စများ ကိုထိန်း သိမ်းပေးနိုင်ရန် နှင့်အန္တရာယ်ရှိ အကျင့်ဆိုးများမှလုံခြုံစေရန် ကျွန်တော် တင်ပြမည့်(အချက်များ)နည်းလမ်းများ ကိုအသေအချာ လိုက်နာ ဆောင်ရွက် သင့်ပေသည်။
အရာရာတိုင်းကိုလက်မလွတ်ခင်အရင်ခိုင်မာတိကျသည့်ရည်မှန်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြုရပေမည်။ပြီးနောက်(သတိနှင့်)အတိအကျကျွန်တော်တင်ပြ မည့်အမိန့်များ(ရှေ့စာမျက်နှာများတွင်တင်ပြပါမည်။)ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရပါမည်။မုချဧကန်အမိန့်ပညတ်များကိုလက်တွေ့အကောင်အတည်ဖော်မည်ဆို လျှင်ဤအကျင့်ဆိုးကိုလက်လွတ်ဖို့ခဲယဉ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။
"မရှိလို့ မလှူ၊ မလှူလို့ မရှိ "
အသက် ၂၁ အရွယ်ရှိပြီးအရေးအကြီးဆုံးရက်များဖြစ်သည့်ဘ၀ကို တစ်ဦးတည်း(အထီးကျန်ဘ၀)ဖြင့်ကုန်ဆုံးစေခဲ့ပါသည်။ဘ၀၏အခက်အခဲအ ကြပ်အတည်းများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏မကောင်းသည့်မျက်နှာများကျွန်တော်ကိုအတိုင်းထက်အလွန်ဒုက္ခပေးပါတယ် …..
ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုလည်းမသိလိုက်ဘူး၊နှစ်အနည်းအရင်ပေါ့၊စာအုပ်တစ်အုပ်လေ့လာနေရာရုတ်တရက်မရည်ရွယ်ဘဲမကောင်းသည့်အကျင့်ဆိုး (လိင်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး)သိခဲ့ရပါတယ် …..
အချိန်တော့ကုန်သွားပြီလေ … ဒါပေမဲ့ဗျာ။ … လူငယ်၊လူပျိုဘ၀ဟာ မည်မျှအရေးကြီးပြီးအန္တရာယ်ရှိကြောင်းဘယ်သူမှမပြောပြခဲ့ပါဘူးတဏှာ၊ရာဂကိုနိုးထစေပြီး၊အသိတရားကိုလောင်ကျွမ်းစေသည့် … ကိုယ်လုံးတီး၊နီကတ် အ၀တ်မပါသည့်၊ကိုယ်တုံးလုံးမိန်းကလေးများ၏ဓာတ်ပုံ များ ကိုကြည့်ပြီးကျွန် တော် ကိုယ်တွင်းကတဏှာစိတ်ကိုနိုးထစေခဲ့ပါတယ် …
ကျွန်တော်(ဒါတွေကြည့်တဲ့)အကျင့်ဆိုးစွဲသွားပါပြီ၊ … ရုပ်နှင့်နာမ်နှစ် ခုလုံးမကျန်းမာတော့ပါဘူး … ရူးသွယ်သည့်အခြေအနေထိရောက်နေပါပြီ။ … ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်အခက်အခဲတွေ့နေရတယ်ဆိုတာတွေးတောင်မ တွေးနိုင်တော့ပါဘူး …
စာရှည်နေသည့် အတွက် လူကြီးမင်းကိုတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျား ကျွန်တော့်၏တိုင်တည်မှုလူကြီးမင်းကြားနေပါတယ်…ကျွန်တော်တစ်ယောက် တည်းမဟုတ်ပါဘူး…ကျွန်တော်လိုအမြောက်အများသောလူငယ်လူရွယ်များဟာလည်းဒီအဆင့်ကိုဖြတ်နေရပါတယ်…ကျွန်တော်လိုပါဘဲကူညီမဲ့သူမရှိပါ ဘူး …
ကျွန်တော်လူပျိုဘ၀တုန်းက ၁၆ နှစ်နဲ့ ၁၇ နှစ်အကြား အရွယ်မှာ လည်း ကိုယ်ကိုသတ်သေဖို့နှစ်ကြိမ်တောင်ကြိုးစားခဲ့ဖူး ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တို့လိုခိုကိုးရာမဲ့ များကို သေခွင့်လည်း မရဘူး ခင်ဗျား အခု ကျွန် တော် အလွန်အားအင်မရှိ တော့ပါဘူး… တောင်းပန်မှုအပြည့် အ၀ဖြင့် တင်ပြ လို ပါတယ်…ရက်အနည်းငယ်ရှိနေပါပြီ၊ မရည်ရွယ်ဘဲ၊ဆန္ဒမရှိဘဲ…ကျွန်တော် ဆီကနေ…အရည်တွေထွက်နေပါတယ်…အခုကျွန်တော်သေရဖို့ဆိုသည့်မုန်တိုင်း၌ဟို ဖက်ဒီဖက်ယိုင်နေပါပြီ၊…ဒီ(မုန်တိုင်း) ဟာ တစ်ဖက် တစ်ချက်ဟာ ကျွန်တော်ကို ပျက်စီးဖို့ခေါ်ဆောင်နေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်…
ကျွန်တော် လူကြီးမင်းဆီ ကတောင်းခံမေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါ တယ်…ကျွန်တော်ကို ကယ်ပေးပါ အုန်းခင်ဗျား…အမြန်ဆုံး အဖြေပေး မည်ဟုလည်း မျှောင်လင့်ထား ပါတယ်… အကယ်၍လိုလားတယ် ဆိုရင်အဖြေ ကိုစာတိုက်ကနေပို့ပြီး ဖြစ်စေ(သို့မဟုတ်)လူကြီးမင်း၏ မဂ္ဂဇင်း“နစ်လ်လေဂျဝါန်” တွင်ပေးနိုင်ပါတယ်…ခင်ဗျား…ကျွန်တော် နှင့် ကျွန်တော် လိုမျိုးအကျင့်ဆိုးများ တွင်နစ်မြှုပ် နေသည့်သူများ ကိုလုံခြုံမှုပေးရန်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ဤမဂ္ဂဇင်းကိုထုတ်နေသည့် လူကြီးမင်းကဲ့ သို့နှလုံးသား သန့်စင်သူခေါင်းဆောင်နှင့် ချစ်လှစွာသောမဂ္ဂဇင်းအတွက် အလုပ် လုပ်ပေးနေသူများ အားလုံး၏ တိုးတက်မှုအတွက် တစ်ဆူတည်း အရှင်မြတ် အလ္လာဟ်ထံဒိုအာပြုလိုက်ပါတယ်။
၀မ်းနည်း ကြေကွဲ ဖွယ်များနှင့်ပြည့်လျှံ နေသည့် စာနောက်
တစ် စောင်၊လူငယ်လူရွယ်တစ်ယောက်၏အခက်အခဲအကြပ်အတည်းများနှင့်ပတ် ၀န်း ကျင်၏၀မ်းနည်းဖွယ်အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်တဲ့စာကိုတင်ပြခဲ့ပါသည်။ရေးသားသူ၏အမည်အားအတိအကျဖော်ပြခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ထားပါသည်။
ယခု ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်လက်ဖြင့်အာသာဖြေခြင်း(Masturdation) ၏ အန္တရာယ်နှင့်အကျင့်ဆိုးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတင်ပြပါမည်။၄င်းအားတော်လှန်ခုခံရမည့် နည်းလမ်း ကိုလည်းတင်ပြပါမည်။ဤအန္တရာယ် ဘေးဆိုးကပ်ကြီးကို အ တိုင်းအတာတစ်ခုအထိဟန့်တား၊ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဟုထင်မိပါသည်။
စပါယ်ရှယ်လစ်ဒေါက်တာများ၊မိမိဘ၀၏လုံလောက်သည့်အချိန်နှစ်ကိုဤအကျင့်ဆိုးအတွက်လေ့လာသုသေတနပြုခဲ့ပြီးစာအုပ်များရေးသားထားခဲ့သည့်ဒေါက်တာများ(ဆရာဝန်ကြီးများ)(နမူနာများအနေဖြင့်စာရှုသူများပြီးခဲ့သည့်ဆွေးနွေးမှုများတါင်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။)တို့ အား ဆန့်ကျင်ပြီးအချို့ ဒေါက်တာများကမိမိတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုဖွင့်ဟထားလေသည်။
၀မ်းနည်းစရာပင်။ဤလေ့လာမှုမရှိဘဲ(ရှာဖွေမှုမရှိသည့်)အမြင်များ ကြောင့်သာလျှင်မြောက်များစွာသောလူငယ်လူရွယ်များဤလာဒ်မရှိစက်ဆုပ် ဖွယ်အကျင့်ဆိုးသမားများဖြစ်သွားကြရလေသည်။
“ဤ ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး အခြေခံကျသည့် အချက် တစ်ခုကို မေ့လျော့နေကြပေသည်။မြောက်များစွာသောလက်တွေ့ မျက်မြင်သက်သေများနှင့်ဤအကျင့်ဆိုးတွင်နစ်မြှုပ်နေသူများ၏၀န်ခံချက်များအရဤအလုပ်ဟာလူသားတွေရဲ့အကျင့်ဖြစ်သွားပါသည်။(ဤအကျင့်၏) နောက်ဆုံးစခန်းကတော့သေခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။ဤအကျင့်ကိုလွယ်လွယ်နှင့်လက်လွတ်လို့မရပါဘူး။
မူးရစ်စေသည့်အရာတစ်ခုခု(အရက်၊ဘိန်း…)ကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါသုံးစွဲယုံဖြင့် ဆုံးရှုံးမှု မရနိုင်ပါဘူး။ သို့သော်လည်းအကျင့်ပါသွားမှစိုးရိမ်စရာနှင့် အန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်။ဒီလိုအကျင့်ပါသွားရင်မနုဿလူသား၏အရာမှန်သမျှကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
အထူးသဖြင့်ဤရောဂါသည်အသက် (၁၆) နှစ်နှင့်အသက် (၂၀) အတွင်းရှိ လူငယ် လူရွယ်များ(လိင်ဆက် ဆံမှု အတွက်မုန်တိုင်းပြင်းနေ သည့် အ ချိန်)ကို အလျင်အမြန် မိမိစက်ကွင်း တွင်ဖမ်းလေ၏။ ပြီးနောက် အကျင့် တစ်ခုအသွင်ဆောင်သွားလေ၏။
အမှန်တကယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်လက်နှီးနှောဖို့(ဖိုနှင့်မ)ဆက်ဆံဖို့ဤ အကျင့်ဆိုးကိုလုပ်ဖို့လောက်ရိုးရိုး(လွယ်လွယ်လေး)မဟုတ်ချေ။အကြောင်းမှာယောင်္ကျားခင်ပွန်းနှင့်မိန်းမဇနီးတို့အနေဖြင့်အထူးတတ်နိုင်မှုများမရှိဘဲမ ဆောင်ရွက်နိုင်ချေ။
ဤအကျင့်ဆိုး၏ ဆိုးကျိုးများဆုံးရှုံးမှုများကို နည်းကြောင်း အသေး အမွှားဖြစ်ကြောင်းပြောဆို၊ရေးသားသူများသည်မုချဧကန်ဤအကျင့်ဆိုးရောဂါဆိုး၏အကျင့်ပါမှုအကြောင်းနှင့်ဤကိစ္စ၏အခြားအထူးအခြေအနေများကိုမသိနားမလည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
အမှန်တကယ်ဆိုလျှင်ဤအကျင့်ဆိုးသမားလူငယ်လူရွယ်များသည်သေခြင်း၊ရူးသွပ်မှု၊ယေဘုယျအားဖြင့်လေဖြတ်မှု၊စွမ်းအားကုန် ခမ်းမှု အထိ ရောက် ရှိပြီးဖြစ်ပေ သည်။မိမိတို့၏ အရာမှန်သမျှ ကိုဤအကျင့်ဆိုး ကြောင့် လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရလေသည်။ဤအရေးကြီးလက်တွေ့မျက်မြင်အဖြစ်အပျက် များကိုငြင်းလို့ရပါသနည်း?
အမှန်ဆိုလျှင်ဤအကျင့်ဆိုးသမားများအကြားအများစုကပြောကြ သည်မှာ - ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဤအကျင့်၏ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အရှုံး၊နစ်နာမှုကို လုံးဝမသိပါဟုဆိုကြလေ၏။
ယခု အမှန်တရားများ ဟာ ရှင်းလင်း ပြတ်သားသွားပြီဖြစ်ပါ သည်။ သတိ၊ အသိလေးလေးနက်နက်ဖြင့်ချစ်လှစွာသောလူငယ်လူရွယ်အားလုံး ကို အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များဖက်သို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။မည် သည့် နည်းဖြင့်ဤအကျင့်ဆိုးတွင်မနစ်မြှုပ်စေရန်ထိန်းသိမ်းရမည်ဆိုသည့်အကြာင်းနှင့်အကယ်၍မြတ်အလ္လာဟ်မလုပ်ပါစေနှင့်…..။အကျင့်ဆိုးသမားဖြစ်သွားလျှင်မည်ကဲ့သို့ကုသရမည်ဆိုတာဖြစ်ပါသည်။
ပထမဆုံးအဆင့်မှအဖြစ်ဤအကျင့်ဆိုးသမားများသည်ဤရောဂါဆိုးအကျင့်ဆိုး၏သေချင်ဖွယ်ဆိုးကျိုးများရှိနေသည့်တိုင်အောင်ကုသ၍ရသည်ဆိုစကား ကိုမလွဲမသွေ မှတ်သားထားရပေမည်။ဒေါက်တာများနှင့်နည်းလမ်းအ ပေါ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမည်ဆိုလျှင်မကောင်း၊မှားယွင်းနေသည့်အကျင့်ဆိုးများအားလုံးကဲ့သို့ဤအကျင့်ဆိုးကိုလည်းစိတ်ချယုံကြည်စွာဖြင့်လက်လွတ်နိုင်ပေသည်။
အကျင့်ဆိုး ကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာသောဆိုး ကျိုးအာနိသင် အမြောက် အများ ကိုအချိန်တိုလေး အတွင်းဤအကျင့်ဆိုး ကိုဖြတ်ပြီး နောက် အဆင်ပြေ သွားပေလိမ့်မည်။အကြောင်းမှာ -
လူငယ်လူရွယ်များ၏မဟာသုခနှင့်ခွန်အားသည်ပြီးခဲ့သည်အတိတ်ကဆုံးရှုံးမှုအမြောက်အများကိုအစားပြန်ထိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။(အားလုံးကိုအစားပြန်ထိုးပေးနိုင်သည်ဟုကျွန်တော်မဆိုထားပါ။ အ မြောက်အများဟုဆိုထားပါသည်။)
ပမာအားဖြင့်ကလေးငယ်များနှင့်လူငယ်လူရွယ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ရှိအနာများ၊ဒဏ်ရာများသည်အမြန်ကြီးပြန်ကောင်းလာသကဲ့သို့မကောင်း သည့် အကျင့်ဆိုး၏ဆိုးကျိုးများသည်လည်းနိုးထပြီးနောက်(ဂရုပြု၊သတိပြုမိသည့် အသွင်ဆောင်ချိန်တွင်)အချိန်တိုလေးအတွင်းအဆင်ပြေ၊ပျောက်ကင်းသွားပေ လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအကျင့်ဆိုးသမားလူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့်မိမိတို့၏အောင်မြင်မှုနှင့်ဆက်နွယ်ပြီးမျှော်လင့်ချက်ကင်းမည်(သိ်ု့မဟုတ်)ခြိမ်းခြောက်မှုကိုခံရမည်ဆိုလျှင်မလွဲမသွေကြီးမားသည့်အထင်လွဲမှုတစ်ခုကိုပြုနေခြင်းဖြစ်ပေသည်။ဤမျှော်လင့်ချက်ကင်းခြင်းနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှု ကိုခံရခြင်း တို့သည် ၄င်းတို့၏ အောင်မြင်ဖို့လမ်းအတွက်အကြီးမားတကာ့အကြီးမားဆုံးပိတ်ဆို့မှုကြီးဖြစ်နေ လေသည်။(ဂရု၊သတိရှိပါလေ။)
လူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့်ဤအကျင့်ဆိုးကိုလက်လွတ်ဖို့၊စွန့်လွှတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့်အကျင့်ဆိုးကြောင့်ဖြစ်လာမည့်အန္တရာယ်များအားလုံးမှ လွတ်မြောက်ရန်မခက်ဘူးဆိုကြောင်းကိုယုံထားဖို့ပထမဆုံးအရေးကြီးပေ သည်။
ယခုအသင့်အနေဖြင့်ပထမခြေလှမ်းကိုလှမ်းလိုက်ပြီး၊အပြည့်အ၀အီမာန်နှင့်မျှော်လင့်ချက်နှင့်အတူဤအကျင့်ဆိုးကိုကုသဖို့အတွက်ကြိုးစားမည်ဆိုလျှင် မလွဲမသွေမိမိကိုယ်ကိုကုသဖို့နှင့်ပြဌန်းမှုအပေါ်လက်တွေ့ကျင့်သုံး ရန်အသင့်ရှိနေပါစေ။
ဤအကျင့်ဆိုးကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ဤကဲ့သို့ပြုနိုင်ပါသည်။ပထမဦးစွာကျွန် တော်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပြီးဖြစ်သည့်ဤအကျင့်ဆိုး၏ဆုံးရှုံးမှုများ၊ဆိုးကျိုး များနှင့်အန္တရာယ်ရလာဒ်များကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြည့်ရပါမည်။
(စောဒကမှာ)“ဤကျွန်တော်တို့ဆီမှာခိုင်မာ၊တည်မြဲသည့်ဆုံးဖြတ် ချက်၊ရည်ရွယ်ချက်စွမ်းအားမရှိချေ။ဆုံးဖြတ်ချက်၊ရည်ရွယ်ချက်အတွက်စွမ်း အားလည်းကျွန်ုပ်တို့ထံမှရုပ်သိမ်းခံလိုက်ပြီးဖြစ်ပေသည်။
အသင်တို့ ၏အဖြေမှာ - အကြောင်းမှာဤအလုပ်ဟာရှက်စရာ ကောင်း သည့်အလုပ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
မြတ်အလ္လာဟ်နေရာတိုင်း(အချိန်တိုင်း)ရှိနေသည်ဆိုတာကိုလည်းမမေ့လျော့သင့်ချေ။အသင်တို့၏အလုပ်အားလုံးအပေါ်မြတ်အလ္လာဟ်၏အမြင်ရှိနေတော်မူပေသည်။အသင်တို့ဘယ်နေရာမှာဘဲရှိရှိ အလ္လာဟ် ၏မျက်မှောက် မှာ၊ရှေ့မှာရှိနေခြင်းဖြစ်ပသေည်။ဤကဲ့သို့သောမြတ်အလ္လာဟ်၏ရှေ့တော် မှောက်ဝယ်ဤကဲ့သို့သော (ရှက်စရာ၊စက်ဆုပ်စရာ) အလုပ်ကိုလုပ်သင့်ပါ သလား?
စိတ်ဝင်စားစရာစကားတစ်ခုမှာ - အစ္စလာမ်သာသနာတော်၏ကြီး ကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူသည့် ဦးသျှောင်၊ ဦးခေါင်း အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒိက် (အ.စ)ထံတော်ဝယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မှလျှောက်ထားလေ၏“မည်သူမည်ဝါ၊သနားစရာသူတစ်ယောက်ဟာ (လိင်ကိစ္စဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုတခု) ပြုသူဖြစ် နေပါသည်။(ဤမကောင်းသည့် အကျင့်ဆိုးမှအပ အခြားအကျင့်ဆိုးလည်း) သူ့ဆီမှာရည်ရွယ်ချက်ပင်မရှိပါ။”
“ဘယ်လိုစကားကိုဆိုနေပါသနည်း? ထိုသူဟာ ဤအလုပ်ကို ပြည်သူအတွေ အရှ့မှာလုပ်ပြရဲပါသလား?”
“ဒါဆိုသိသာနေပြီဘဲ၊သူကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်၊ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လက်အတွင်းရှိမှုကြောင့်လုပ်တာဆိုတာ …..”
“ဆုံးဖြတ်ချက်မအောင်မြင်ခြင်းသည်ဆုံးဖြတ်ချက်၏အာနိသင်အားလုံးနှင့်လူသား အတွင်းမရှိတော့ ဟုဆိုလိုရာမရောက်ပေ။ ဤမအောင်မြင်ခြင်း သည် ဆုံးဖြတ်ချက် ၊ ရည်ရွယ်ချက် သည်မနုဿလူသား ၏နှလုံးသားနှင့်ရူဟ် (၀ိဥာဉ်)၏ အနက်တွင်နောက်ဆုံး၊ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြီးခဲ့သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် ထက်ပိုပြီးခိုင်မာတည်မြဲမှုအစွမ်းကိုဆောင်လေ၏။”
မနုဿလူသားဟာအချိန်တစ်ချိန်ချိန်မှာမိမိကိုယ်ပိုင်ခြေထောက်ဖြင့်တောင်ထိပ်ကိုတက်ရန်ကြိုးစားလေ၏။(သို့မဟုတ်)ကား၏အကူအညီဖြင့်အ မြင့်တစ်ခုခုကိုတက်ရန်ကြိုးစားကြလေသည်။ပထမအကြိမ်(သို့မဟုတ်)ဒုတိယအကြိမ်တစ်ခါတစ်လေ(၁၀)ကြိမ်ရောက်သည်အထိလည်းပဲမအောင်မြင်ခဲ့ ချေ။
ကဗျာတစ်ပိုဒ် (သို့) စာတစ်ပုဒ်ကိုကျက်မှတ်ရန်ပထမအကြိမ် အဖြစ် (၉)ကြိမ်ထပ်ထပ်ကျက်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ပြီးနောက် ကာလအနည်း ငယ် ကြာ ပြီးမေ့သွားနိုင်ပေသည်။ သို့သော်နောက် တစ်ခေါက် ကျက်မှတ်ရန် (၉) ကြိမ်ပြန် နွေးဖို့၊ကျက်မှတ်ဖိုပမလိုတော့ချေ။(၃)ကြိမ်သည်ဖူလုံကောင်းဖူလုံနိုင် ပေသည်။
ဆိုလိုသည်မှာကျက်မှတ်ထားသည့်အတိတ်ကအာနိသင် များသည် မနုဿလူသား၏ရူဟ်တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။ဤအတွက်ကြောင့်ဒုတိယအ ကြိမ်ကျက်မှတ်ရာတွင်လွယ်ကူသွားလေတော့သည်။ထိုနည်းတူစွာမနုဿလူသား၏ရူဟ်(၀ိဥာဉ်)နှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်ရှိသမျှအားလုံးသောကိစ္စမှာဤ အတိုင်းဖြစ်လေသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍အကယ်၍ယခုအချိန်အထိ(၁၀)ကြိမ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြု၍ မ အောင်မြင်ခဲ့လျှင်လည်းအကျင့်ဆိုးအမျိုးအစားတိုင်းအားစွန့်လွှတ်ရန်သံကဲ့သို့ခိုင်မာသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်၊ရည်ရွယ်ချက်၊ပြတ်ပြတ်သားသားကိုချဖို့အသင့်ပြုရ ဖြစ်သွားပေမည်။
မိမိတို့ ၏ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အား၊ စွမ်းအား (အထူးသဖြင့် မြတ် အလ္လာဟ် ပေါ်ထားသည့်အီမာန်၏အင်အား)ကိုစုပေါင်းပြီးဤေ အာင်မြင် မှုကိုဆွတ်ခူးရပေမည်။
သင်… ကြောင့် သာသနာ့ စာပေမွန်များ ထုတ်ဝေ လှူဒါန်း နေမှု အားပျော့ခြင်း ၊ ရပ်စဲသွားခြင်း မျိုး မဖြစ်ပါစေနှင့် …
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်လိင်ကိစ္စဆိုင်ရာ ဖောက်ပြန်မှုများ၏ အန္တရာယ်၏ ဆုံးရှုံးမှုများ အကြောင်း၊ အထူးသဖြင့်လက်ဖြင့် အာသာဖြေခြင်း (Masturdation)ကိုဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။တခါတလေဤ“လက်ဖြင့်အာသာ ဖြေခြင်း”ကိုသမိုင်းဆိုင်ရာဝတ္ထုများမှတစ်ခုဖြစ်သည့် “အိုနာနီးမ်”ဟုလည်းခေါ် ပါသည်။
ဤအကျင့်ဆိုးဟာမနုဿလူသားကိုအလျင်အမြန်အကျင့်စွဲအောင် ဖြစ်စေသည်ဆိုတာငြင်းမရချေ။အကျင့်ဆုံး၏အရင်းများမည်မျှအထိကျယ်ပြန့် နေသည်ဆိုလျှင်မနုဿလူသားဟာတစ်နေ့တည်းအကြိမ်များစွာဤအကျင့် ဆိုးကိုကျူးလွန်လေ၏။
အနှစ်ချုပ်၊အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်ဆို၇လျှင်။ အလွန်တရာလိမ္မာပါးနပ် စွာနှင့်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ“လာမည့်အမိန့်ပညတ် များ”ကိုလက်တွေ့ ကျင့်သုံးပြီးဤအကျင့်ဆိုးအားတော်လှန်ရန် ထရ ပေမည်။
ဤအကျင့်ဆိုး၏လက်အောက်မှလွတ်မြောက်သွားသူများသည်မလွဲမသွေမိမိတို့၏သန့်ရှင်းသန့်ပြန့်မှုကိုအလေးအမြတ်ထားရပေမည်။ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး(နောက်ထပ်မကျူးလွန်ရေး)အတွက်အထူးဂရုသတိပြုရပေမည်။ဤလမ်းစဉ်အတွက်ရှိုန်တွာန်နီပယောဂအမျိုးမျိုးမှ(သတိ၊အသိဖြင့်) ရှောင်ကြဉ်ရပေမည်။မိမိ၏ဘ၀ကံကို(ဘ၀ကို)မည်သည့်တန်ဖိုးနှင့်မျှ လဲလှယ် ပြီးလမ်းလွဲလမ်းမှားနေသူများနှင့် လမ်းလွဲလမ်းမှားနေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်လက် သို့ထိုးမအပ်လိုက်ပါနှင့်။
ကျွန်ုပ် တင်ပြလမ်းညွှန်ပြီး ဖြစ်သည့်အတိုင်း အကျင့်ဆိုးအကျင့်ပျက် တိုင်း၊ ထို့ပြင်အန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်ကိစ္စဆိုင်ရာပြဿနာအခက် အခဲ များကို တော်လှန်ရန်၊စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမှာ “မျှော်လင့်ချက်နှင့်အောင်မြင်မှုအတွက် စိတ်ချ၊လက်ချ “ပြစ်မှု” နှင့်ပြတ်သားခိုင်မာသည့်ဆုံးဖြတ်ခိုင်မာသည့်ဆုံးဖြတ် ချက်ရှိဖို့သာဖြစ်ပေသည်။
အကြောင်းမှာ - နောက်ဆုံးမအောင်မြင်ခဲ့သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ ကျန်ရှိနေသေးသောအာနိသင်များမတော်တဆ၊ပေါင်းစုမိပြီးမိမိတို့အစွမ်းပြ လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
သေချာသောအချက်နောက်တစ်ခုမှာ - ဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များ (အကျင့်ဆိုးသမားများ၊အကျင့်ဆိုးစွဲနေသူများ)အနေဖြင့်မိမိတို့၏အရှင် မြတ်အလ္လာဟ်နှင့်ဆက်သွယ်၊နီးစပ်မှုထားရှိမည်။မိမိတစ်ကိုယ်လုံး၏တည်ရှိမှု၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်မြတ်အလ္လာဟ်ဆီမှာကူညီဖေးမှုကိုတောင်းဆိုမည်။ မြတ်အလ္လာဟ်၏ကျေးဇူးတော်ပြုမှုကိုမျှောင်လင့်ချက်ထားမည်ဆိုလျှင်မဇ်ဟဗ်ဆိုင်ရာဤအီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်မှုသည်အလွန်အလျှင်အမြန်ရလာဒ်(ကောင်း သောအကျိုးအမြတ်များ)ကိုသာပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုဤ(အထက်ဖော်ပြထားသည့်)ဤလမ်းခရီးများကိုကျော်ဖြတ်ပြီးနောက်မလွဲမသွေအောက်ဖော်ပြမည့်အချက်များပညတ်များကို အတိ အကျ အသုံးချစေလိုပါသည်။ဆောင်ရွက်စေလိုပါသည်။
အကယ်၍လူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့်မျှော်လင့်ထားမည် ..... ညတိုင်းတဏှာ၊ရာဂနှင့်ပြည့်နေသည့်အပြာကားများ၊အပြာဇာတ်လမ်းများကိုအမြဲတစေကြည့်မည်၊နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိမိ၏အဖိုးတန်အချိန်များ၏အချို့အချိန်ကိုအချစ်(ရူး)၀တ္ထုများ၊လမ်းလွဲလမ်းမှားအောင်ပြုပြီး၊တဏှာရာဂ၊လိင်ကိုနိုးထစေသည့်ဓာတ်ပုံများပါသည့်မဂ္ဂဇင်းကိုကြည့်မည်၊ဖတ်မည်၊လမ်းသွယ လမ်းမ များပေါ်တွင်ဟိုပေါ်၊ဒီပေါ်(တင်ပေါ်၊ရင်ပေါ်၊ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအစားတစ်ခုလုံး ပေါ်အောင်တင်းတင်းရင်းရင်းဝတ်ဆင်ထားသည့်)အမျိုးသမီးများ၊ကောင်မ လေးများကိုငမ်းမည်၊ကြည့်မည်။
ဤကဲ့သို့သော(တဏှာ၊ရာဂ)ကိုကြွစေသည့်အတုအယောင်မှန်သမျှများသည်မည်သို့မည်မျှအရေးကြီးမလိုအပ်ချေ။(ဤအရာများသည်)လူငယ်လူရွယ်တို့၏ဘ၀အခြေခံပြဿနာများ၊ကိစ္စများဆိုင်ရာတွေးတော်မှုလမ်းကိုလှမ်းမျှော်စေလေသည်။လိင်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးအစွန်းရောက်ပြင်းထန် လာမှုက ဖြစ်စေပြီး(တဏှာ)မုန်တိုင်းကိုထန်စေလေသည်။နေ့ညမအီမသာအခြေအနေနှင့်အမြဲအမျက်ဒေါသထွက်နေသည့်အခြေအနေမလိုလားသည့်အာနိသင်များ၎င်းတို့၏တည်ရှိနေမှုကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးတွင်အရိပ်ပမာလိုက်နေပေလိမ့်မည်။
ဆက်လက်၍ဤအကျင့်ဆိုးကိုအမြဲတစေပြုခြင်းဖြင့်ဘ၀အတွက်အ ကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်ဘ၀၊တစ်နည်းအားဖြင့် လူပျို၊လူငယ်ဘ၀ပျက်စီး၊ပျက်စီးစေပြီးလူပျို၏ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးစေလေသည်။
ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နည်းဖြင့်ဤကဲ့သို့သောအလုပ်များကိုလုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ပါလေ။မိမိ၏တည်ငြိမ်သည့်တွေးတောစဉ်းစားမှုကိုဤနည်းဖြင့်မဖျက် ဆီးပါလေနှင့်။မိမိ၏အင်အားရှိသည့်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများကိုအမြဲ တဏှာ၊ရာဂထမှုဖြင့်အားပျော့၊အားနည်းအောင်မပြုပါလေနှင့်။
ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်စွာနေထိုင်နိုင်ရန်အလို့ငှာမိမိ၏ အားလပ်သည့်အချိန်ကိုမှန်ကန်ကောင်းမွန်သည့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အသုံးချပါလေ။မိမိ၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတို့၏အကူအညီဖြင့်မှန်ကန်သည့်အစီ အစဉ်(များကို)မိမိ၏အချိန်များကို(စည်းစနစ်ကျစွာ)တန်ဆာဆင်ရပေမည်။
မိမိအချိန်များအားလုံးကို အလုပ်အသေး များဖြင့်တန်ဆာဆင်ခြင်း
လူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့်မိမိတို့၏အချိန်များနေ့နှင့်ညကိုအသေ အချာ၊တစ်နာရီမျှပင်အချည်းနှီး၊အလကားမဖြစ်အောင်အစီအစဉ်၊အလုပ်များ နှင့်တန်ဆာဆင်သင့်ပေသည်။
လူငယ် လူရွယ်တစ်ယောက်ယောက် အနေဖြင့်အလုပ် လက်မဲ့ဖြစ် မည်၊အလုပ်ရှာနေမည်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပေသည်။သို့သော်ဤကဲ့သို့အခြေအနေတွင်လည်းမိမိ၏နေ့နှင့်ည၏အချိန်ပိုများကိုအသုံးချရန်အစီအစဉ်ဆွဲရပေမည်။ထိုအစီအစဉ်များဟာစာပေလေ့လာခြင်း၊လှည့်ပတ်ခြင်း၊အနားယူခြင်းစသည်တို့ကိုပင်ဖြစ်ပါစေ၊ပြုလုပ်ရပေမည်။
ယုတ်စွအဆုံးလူငယ်များအနေဖြင့်မိမိ၏အချိန်များကိုနေ့စဉ်အစီ အစဉ်များအရအတိုးအလျော့ပို၍တစ်ခဏတာပင်အလကားမဖြစ်အောင်တန်ဆာဆင်ထားမည်ဆိုလျှင် ပို၍ကောင်းပေသည်။
အကြောင်းမှာ - တွေးတောဆင်ခြင်မှုအမြောက်အများကိုပြုခြင်း သည်မကောင်းသည့်အကျင့်ဆိုးများကိုစွန့်လွှတ်ဖို့အလွန်တရာအကျိုးဝင်မည် ဖြစ်ပေသည်။
ဆေးလိပ်သောက် ၀ါသနာပါသူများသည် အလုပ်ပိတ်ရက်များတွင် အလုပ်ရှိသည့်၊အလုပ်လုပ်ရသည့်နေ့များထက်ပိုပြီးဆေးလိပ်သောက်ဖြစ်ကြ သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
ဤအတွက် ကွာခြားမှုမှာ(အလုပ်ရက်များတွင်)တွေးတောမှုနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများကိုကောင်းသည့်အလုပ်များအတွက်အသုံးချရသ ဖြင့်အဓိပ္ပာယ်မဲ့နှင့်ဆုံးရှုံးမှု၊ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေသည့်အလုပ်(ဆေးလိပ်သောက် ခြင်းကို)ထိန်းချုပ်ပေးလေသည်။(ဆိုလိုသည်မှာအလုပ်ရှိတော့အသောက် နည်းပြီးအလုပ်မရှိတော့အသောက်များသွားခြင်းဖြစ်လေသည်။)
အနှစ်ချုပ်၊အကျဉ်းအားဖြင့်လိင်ကိစ္စဖောက်ပြန်မှုများတွင်နစ်မြှုပ်နေသူများအနေဖြင့်မိမိတို့အချိန်ကိုစည်းစနစ်ကျသည့်အစီအစဉ်များဖြင့်တန်ဆာမဆင်ခဲ့နိုင်လျှင် ထိုအကျင့်ဆိုးများကို လွယ်လွယ်နှင့် စွန့်လွှတ်နိုင်မည်မဟုတ် ပေ။
ဤအကျင့်ဆိုးများ၌နစ်မြှုပ်သူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အထီး ကျန်နေထိုင်သူများ၊လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးသူများ၊တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ပြီးနောက်ဤအထီးကျန်နေထိုင်ခြင်းဖြင့်မလှုပ်မရှားနေခြင်း သည်၎င်းတို့၏အခြေအနေကိုပိုပြီးဆိုးကျိုးဖြစ်စေလေသည်။
အကယ်၍ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤအခြေအနေမှအပြင်ထွက်လာပြီးမိမိဘ၀တွင်လှုပ်ရှားမှု(အသစ်)များကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်ဆိုလျှင်မလွဲမသွေ၎င်း၏အခြေအနေတွင်ကောင်းမှု (များ) ဖြစ်ပေါ်လာပေလိမ့်မည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်အကျင့်ဆိုးရှိသူများ၊စွဲနေသူများ၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်အားနည်းမှုအားလျော့မှုကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများ(အကြောစသည်) သည် အားနည်းမှုရှိပေသည်။
သို့မှသာ မိမိတို့ဆုံးရှုံးသွား သည့် ကျန်းမာရေးကို တဖန်ပြန် လည် ပိုင်ဆိုင်နိုင် တွက်သီးသန့်ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လှုပ်ရှားမှုနှင့်အားကစားသည်၎င်းတို့အတွက် (အကျင့်ဆိုးသူများ) အကျိုး အမြတ်ကို ပေးဆောင်နိုင်သကဲ့သို့အထီးကျန်နေခြင်းနှင့် နက်ရှိုင်းစွာ (အချည်းနှီး)တွေးတောခြင်းသည်လည်းအဆိပ်ကဲ့သို့လူသတ်သူဖြစ်ပေသည်။မလွဲမသွေတန်ဖိုးဈေးဘယ်လောက်ပင်ကြီးပစေ၊ကုန်ပါစေ၊ဤအရာများကိုအဝေးသို့ပစ်သင့်ပေသည်။
ဤဆိုဆုံးမမှု ကိုမမေ့လျော့လိုက်ကြပါနှင့်။ တန်ခိုးကြီးသည့် အကျိုး အာနိသင်စွမ်းအားများကိုကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်ပါသည်။တစ်နေ့လုံးအားကစားလုပ်ပြီးနောက်ညအိပ်ယာဝင်စဉ်ချက်ချင်းနှစ်ခြိုက်စွာကောင်းကောင်းကြီးအိပ်ပျော်သွားပေလိမ့်မည်။
ထိုနည်းတူစွာမကောင်းမှုနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုသာပေးသည့်ဖြစ်ပေါ်စေသည့် စိတ်ကူးယဉ်မှုများ၊ တွေးတောမှုများမှ စောင့်ထိန်းပေးလိမ့် မည်ဖြစ် ပါသည်။
မကောင်းသည့် အကျင့်ဆိုးကိုလက်လွတ်၊ စွန့်လွှတ်ရန်အကျင့် ကောင်းကိုရှာဖွေပြုလုပ်ရန်လုံးဝအရေးကြီးပေသည်။ထိုမှသာလျှင်ထိုအကျင့်ဆိုး၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပေမည်ဖြစ်ပါသည်။
သာဓကအားဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုအားလုံးကိုသိပြီးလောင်းကစားအကျင့်ရှိသူ ဖြစ်မည်။ဒါလည်းပဲမစွန့်လွှတ်မည်။၄င်းတို့၏ပြောဆိုချက်အရလောင်းကစားရမည့် အချိန် ရောက်လျှင်ထောင်သမား တစ်ဦးပမာခိုင်း စေနေ ပြီး မသိသည့် ခွန်အားလုပ်ခိုင်းကြောင်းဆိုလေသည်။ဤအချိန်၌အသိဥာဏ်နှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားသည်လည်းအစေခံဖြစ်သွားရလေသည်။
ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဒီအကျင့်ဆိုး၊မကောင်းသည့်အကျင့်စွဲ သွားသူများဖြစ်သွားကြလေသည်။မလွဲမသွေထိုအချိန်(လောင်းကစား၊အရက်သောက်…..)ကိုမှန်ကန်သည့်ကစားမှု(ပမာအားဖြင့်ကောင်းမြတ်သည့်အားကစားပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို အစားထိုးကစားရပေမည်။ထိုမှသာဤအကျင့်ကောင်းက မကောင်းသည့်အကျင့်ဆိုးနေရာယူမည်ဖြစ်ပေသည်။
လိင်ကိစ္စဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုများတွင်လည်း(ဤအတိုင်း)မလွဲမသွေလူငယ်လူရွယ်များ၏တဏှာ၊ရာဂကိုနိုးထစေချိန်မရောက်မှီ (အချိန်မီ) အစီ အစဉ်(များ)ကို(ကြိုးပမ်း)ရှာဖွေရပေမည်။ပြီးနောက်လက်တွေ့ကျင့် သုံးရ ပါ မည်။သာဓကအားဖြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲ၊အားကစား၊ဥာဏ်စမ်းပွဲ၊စိတ်ဝင်စားဖွယ်စာအုပ်တစ်အုပ်အားလေ့လာခြင်း၊(မိမိ)ကြိုက်သည့်အားကစားတစ်ခုခုကိုပြုခြင်း၊တောင်တက်ခြင်း၊မြင်းစီးခြင်းစသည်အလုပ်များကိုမကောင်းသည့်အကျင့်ဆိုးများနေရာသို့ရောက်လာသည့်အထိဆက်တိုက်ပြုလုပ်ရပေမည်။
လုံးဝဥဿုံတစ်ဦးတည်း၊တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်နေခြင်းမပြုပါလေနှင့်။အိမ်တွင်လည်းတစ်ယောက်တည်းနေခြင်းမှရှောင်ပါလေ။ညကိုလည်းအခန်း၌ တစ်ယောက်တည်း အိပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါလေ။ လူမရှိသည့် နေရာ တစ်ဦးတည်းစာအုပ်မလေ့လာပါနှင့်။
(ဤအတွက်ကြောင့်)မည်သည့်လူငယ်လူရွယ်မဆိုမိမိ၏ ကံကောင်း ကံထူးမှု၊ ကျန်းမာခြင်း၊ လက်ဖြင့်အာသာဖြေခြင်း၏အန္တရာယ်ဆိုး များမှ လုံခြုံ မှု ရ လိုလျှင်အထီးကျန်နေခြင်းမှရှောင်ရ၊ကြဉ်ရမည်ဖြစ်ပေသည်။
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည်ဤလိင်ကိစ္စဆိုင်ရာ ဖောက်ပြန်မှုများကိုတော်လှန်နိုင်ဖို့အစွမ်းသတ္တိရှိပေသည်။ပြီးနောက် အိမ်ထောင်ကိစ္စအတွက်မျှော်လင့်တောင်းခံချက်များကိုနည်းလိုက်မည်၊မလို အပ်သည့်ဧည့်ခံမှုအဆောင်အယောင်များကိုဖြုတ်လိုက်မည်ဆိုလျှင်အလွန်တရာလွယ်ကူသွားပြီး၊သာမန်ကိစ္စဖြစ်သွားပေမည်။
သို့သော်ဝမ်းနည်းလေစွ! မှားယွင်းနေသည့် ထုံးထမ်းစဉ်လာများ၊ မှားယွင်းသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှအဆင့်အတန်းများ(စာတတ်ပေတတ်နှင့်စာမတတ်ပေမတတ်)ကိုလွှမ်းမိုးထားပြီး၎င်းတို့ကိုချုပ်ကိုင်ထားလေသည်။
အကြောင်းမှာ-(ရှရီအီ) ဥပဒေပညတ်ချက်များ ကိုလက်တွေ့ ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် အကျင့်မှား၊ အကျင့်ဆိုး များကို လည်းစွန့် လွှတ်ရန် လွယ်ကူ သွားလေသည်။ ပြီးနောက် အိမ်ထောင် ပြုဖို့အဆင့်အားလုံးသည် လည်း အောင်မြင်သွား မည်ဖြစ်ပါသည်။
“သလ်ကင်(န)”လည် ဤအကျင့်ဆိုး၊အကျင့်မကောင်းအား တော် လှန် ရာ၌ အကောင်းဆုံးကဏ္ဍမှပါဝင်လေသည်။ဤအကျင့်ဆိုးစွဲနေသူ များအနေဖြင့်အဆက်မပြတ်မိမိကိုယ်ကို“သလ်ကင်(န)”လုပ်နေရပေမည်။ “သလ်ကင်(န)”သည်အကျင့်ဆိုးများကိုစွန့်လွှတ်စေဖို့အပြည့်အ၀တတ်စွမ်းနိုင်ပေသည်။အကြောင်းမှာ - “သလ်ကင်(န)”သည်ဤကဲ့သို့သောရောဂါသည်၊ အကျင့်ဆိုး သမားများအတွက် အာနိသင်ထိရောက်မှု ကြီးမားပြီး၊ အလွန်အမြန် စွမ်းဆောင်နိုင်လေသည်။ စိတ်ပညာဆိုင်ရာ ဆရာ ၀န်များ မှ တစ်ဦးဖြစ်သူ (ဒေါက်တာဝီးက်သူရ်ပူရှေဟ်-ပြင်သစ် နိုင်ငံသား)မှ ပြောကြား လေ၏။
ထို့ပြင်တ၀မလွဲမသွေ ဆုံးဖြတ်ချက်၏ခွန်အား ၊စွမ်းအား ကိုဖြစ်စေ သည့်စာအုပ်များကိုလေ့လာဖတ်ရှုရပေမည်။လူသား၏ဂုဏ်သရေရှိမှုအတွက်တိုးတက်ခြင်း၊(ခိုင်မာသည့်)ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခွန်အားကိုဖြစ်စေသည့်စာအုပ်စာပေများဖူလုံပါသည့်အထိရေးသားသီကုံးထားကြလေသည်။
လမ်းလွဲ လမ်းမှားပြီးအကျင့် ဆိုးရှိသူများ ၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အတူ နေထိုင်ခြင်း မှ အချိန်တိုင်း၊ အထူးသဖြင့် အကျင့်ဆိုးအား တော် လှန် တိုက်ထုတ်နေချိန်တွင်လုံးဝရှောင်ရပေမည်။ကာလ၀မ်းရောဂါသည်များဆီမှာထွက်ပြေး၊တိမ်းရှောင်သကဲ့သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြပေမည်။
ထို့ပြင်ဤအလုပ်၏ကြောက်မက်ဖွယ်နှင့်သေချင်ဖွယ်ကောင်း သည့် ရလာဒ်ဆိုးများကိုလုံးဝနမော်နမဲ့မတိုင်းဘဲနေရပေမည်။ဒွိဟ၊သံသယဖြစ် စေ မည့်စကားများကိုလုံးဝနားထောင်စရာမလိုချေ။
မကောင်းသည့်မိတ်ဆွေ၊သူငယ်ချင်းအပျက်များ၊ဖောက်ပြန်နေပြီး၊ လမ်းလွဲလမ်းမှားနေသည့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများသည်ဤအကျင့်ဆိုးကို (တော်လှန်နေသည့်သူ)ဆက်လုပ်ရန်တိုက်တွန်းရာတွင်အလွန်အံ့သြဖွယ် သရုပ်ကိုဆောင်ကြလေသည်။
သို့သော်လည်းပဲအသိ၊သတိရှိကြသည့်လူငယ်လူရွယ်များသည်၎င်းတို့ထောင်ထားသည့် ရှိုင်တွာန် မိစ္ဆာမကောင်းဆိုးဝါး၏ကျော့ကွင်းတွင်မည် သည့် အခါမျှမမိကြပေ။
ပြည့်စုံပြီး (ဘေးကင်း)ကောင်းမွန်သည့် အစားအသောက် များသည် ကိုယ်ခန္ဓာ အားခွန်အားဖြစ်စေသည့် အပြင်လူငယ်လူရွယ်တို့ ၏ အကျင့်ဆိုး ကြောင့် အားပျော့ အားနည်းသွား သောအဓိက ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်း များ (သို့) ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်း များကိုအားနည်း အားပျော့မှု အကြောင်း ဖြစ်စေ မှုအပေါ်အံ့သြဖွယ် စွမ်းဆောင်နိုင် လေသည်။
(ရာသီဥတု အခြေအနေ အရကြည့်ပြီး) ရေအေးဖြင့်ရေချိုးခြင်း ပြီး နောက် တပက်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုသုတ်ခြင်းဖြင့် ဤကဲ့သို့ အကျင့်ဆိုးရှိ သူများ ကို အလွန် တရာ (စွန့်လွှတ်ဖို့၊ပြတ်ဖို့) အကူ အညီပြုရာ ရောက်လေသည်။
ထိုနည်းတူစွာဤကဲ့သို့သော်ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်မလွဲမသွေ၊တဏှာ၊ရာဂကို နိုးထစေသည့်အကြောင်းခံသည့် အင်္ကျီ၊အ၀တ်များ သည် ယေဘုယျ အား ဖြင့်ဆုံးရှုံးမှု ကိုဖြစ်ပေါ် စေပါသည်။
တစ်ခါ တစ်လေ ကိုယ်ခန္ဓာ၏သဘာဝအရတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု အ တွက် အကျိုးယုတ်မှုနှင့်အန္တရာယ်ဖြစ်သွားလေသည်။၄င်းအပြင်ဒွိဟသံသယ၊မတည်ငြိမ်မှု နှင့် တဏှာရာဂစိတ်ကိုနိုးထပေးရာအကြောင်းခံဖြစ်လေသည်။ (ဂရု နှင့် သတိပြုပါလေ။)
ဤကဲ့သို့ အကျင့် ဆိုးစွဲနေသူများရှိနေသူများသည်မိမိတို့ ကိုယ်မိမိ မြတ်အလ္လာဟ်အမုန်းခံထားရသူနှင့်မောင်းထုတ်ခံထားသူအဖြစ်မြတ်အလ္လာဟ်ထံဝယ်လုံးဝဥဿုံ(မထင်မှတ်)မသတ်မှတ်လိုက်ပါနှင့်။တနည်းအားဖြင့်အမြဲတစေကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူသောမြတ်အလ္လာဟ်၏ အကြင်နာ၊အယုအယ မေတ္တာ ကို အပြည့်အ၀မျှောင်လင့်သူဖြစ်ရပါမည်။ နမာဇ် အချိန်နှင့်နမာဇ်ပြီး နောက်မိမိဦးခေါင်းကို စဂ်ျသာ ပြုပြီးသနားကြင်နာတော်မူပြီးခွင့်လွှတ်ပလပ် ပေးတော်မူသည့်မိမိ၏ထာဝရအရှင်၊မြတ်အလ္လာဟ်ထံလျှို့ဝှက်ချက်နှင့်လိုလားချက်များကိုတောင်းခံပါလေ။
မိမိ၏နှလုံးသား၊အသက်၊ ကိုယ်ခန္ဓာ တည်ရှိ နေမှုဖြင့် အားလုံးကို (အာရုံစိုက်၊ဂရုပြုပြီး) မိမိ အရှင်မြတ်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံတောင်းခံမှုပြု ပါလေ။
ဤမကောင်းသည့်အကျင့်ဆိုးကိုစွန့်လွှတ်၊လက်လွှတ်နိုင်ရန် အကူ အညီ မြတ်အလ္လာဟ် ထံတောင်းခံပါလေ။
ယုံကြည်မှု၊စိတ်ချမှုထားပါလေ။အကယ်၍မည်သည့်လူငယ်လူရွယ်မဆိုအသက်နှင့်နှလုံးနှင့်တကွ(ကိုယ်ရောစိတ်ပါ)မြတ်အလ္လာဟ်၏နန်းတော်ဝယ်တောင်းဆုပြုမည်ဆိုလျှင်မြတ်အလ္လာဟ်၏သနားကြင်နာ၊ယုယမှု၊ထွေးပိုက်မှု နှင့်အကူအညီအဖေးအမ(မလွဲမသွေ)ရရှိခံစားရလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘ၀၏ ဤတိုက်ပွဲတွင်အောင်လံလွှင့်ထူသူဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
၄င်းအပြင် နေရာတိုင်း ၊ အခြေအနေတိုင်းမြတ် အလ္လာဟ်ရှိတော်မူ ကြောင်း၊မြင်တော်မူ ကြောင်းဆိုသည့် အချက်သိရှိနားလည်ထား ရ ပေမည်။ ဘယ်တော့မှမြတ်အလ္လာဟ်၏ရှေ့တော်မှောက်ဝယ်ဤကဲ့သို့ မကောင်း သည့် အလုပ် မလုပ်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုခွင့်မပြုပါလေနှင့်။ကျွန်ုပ် အနေဖြင့် အပြည့် အ၀ ယုံကြည်ပါသည်။
အကယ်၍ ဤရောဂါဆိုး တွင်နစ်မြှုပ်နေသူများ အထက်ဖော်ပြထား သည့် ပညတ်တော်များကိုအတိအကျတစ်လအတွက်သာကြိုးပမ်း အားထုတ် မည် ဆို လျှင် လမ်းလွဲ လမ်းမှားမှလွတ်မြောက်မှုကိုဆွတ်ခူးရ လိမ့်မည် ( ဖြစ် ကြောင်း အသိပေးမေတ္တာရပ်ခံလိုက်)ပါသည်။
“ အို ... မြတ်အလ္လာဟ်၊ကျွန်တော်မျိုးမိသားစု၏ လောကီ၊ လောကုတ္တရာ နှင့် ကျွန်တော်မျိုးတို့မိသားစု ၏ ကဘရ် (တွင်း) အတွက် ဤ မပြော ပလောက်သည့် ကြိုပမ်း အားထုတ် မှုအား သနား ကြင်နာတော်မူ ပြီး နှစ်မြို့ လက်ခံသဘောတူပါ။ ”
အာမီးန် ယာရဗ်ဗေ့ အာလမီးန် ၊ ဗေဟက်ကေ ကုရ်အာန် ၊ မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ဝါ အာလေမိုဟမ္မဒ် (အ.စ)
မွေးရပ်အမိမြေ ၊ တောင်ကြီးမှ …
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင် … ဒိုအာပြုလျက် …
ربّنا تقبل منّا انّک انت السّمیع العلیم
آمین یا رب العالمین ، بحق قرآن و محمّد (ص) و آل محمّد (ع)